Waa maxay qoraalka qoraalka jawaab celinta tooska ah? Sida loo qoro Nuqul beddelaya | Martech Zone
Waa maxay qoraalka qoraalka jawaab celinta tooska ah? Sida loo qoro Nuqul beddela
Khamiista, Sebtember 6, 2018 Wednesday, September 5, 2018 Douglas Karr
Celceliska maqaalka si fudud looma qaban doono. Weli waan sii yaabayaa markaan fiiriyo mowduucyada xiisaha leh ee ku saabsan raadinta iyo bulshada laakiin markii aan bilaabo inaan akhriyo maqaalka, waa uun caajis iyo macluumaad la'aan. Haddii aad dhisto laba bog oo soo degitaan ah isla dalab sax ah, waxaan damaanad qaadayaa in mid ka mid ah oo uu soo qoro hal-abuur curyaan ah uu ku soo jiidan doono fiiro gaar ah. Xusuusin dhinac ah, wali waxaan ku haminayaa inaan noqdo qoraa weyn. Waxaan qorayay 10 sano oo aan sii wadaa barashada.
Koeppel Direct's infographic dhawaan, Qoraalka Jawaabta Tooska ah: Nuqul Abuurista oo beddeleysa, wuxuu la wadaagayaa qaar ka mid ah sirta qoraal-celinta jawaabta tooska ah adduunka oo dhan. Baro sida loo farsameeyo dadaal gacan ku dhiigle jawaab celin toos ah (DR) waqti yar, ama ugu yaraan sida qoraaga aad ugu jeceshahay ay u adeegsadaan farahooda sixirka ah si ay ugu duugaan hogaamiyaashaada macaamiisha waaweyn.
Waa maxay Nuqul Jawaab Toos ah?
Jawaabta tooska ah waa weedh gaar u ah qoraalka qoraalka ama istaraatiijiyada xayeysiinta ee aad rabto inaad ku dhaqaaqdo tallaabo buuxda. Suuqgeynta jawaab celinta tooska ah ama xayeysiinta ayaa had iyo jeer leh wicitaan ficil oo leh natiijo deg deg ah, oo la qiyaasi karo. Tusaalayaashu waxay noqon doonaan bog degitaan halkaasoo foom la buuxiyo ama natiijooyinka badhanka guji-ka-wac ee wicitaanka iibka. Bogagga degitaanku waxay had iyo jeer isticmaalaan nuqul jawaab celin toos ah.
Peter Koeppel wuxuu tilmaamayaa 5 tilmaam qoraal oo jawaab celin toos ah si aad u bilowdo:
Go'aamiso yoolalka nuqul kaaga. Miyaad iibinaysaa kabo ama waxaad isku dayeysaa inaad hesho qof ugu deeqo arrin?
Qorshee jidkaaga. Sideed ku gaaraysaa hadafkaas? Waa wakhti kooban oo hal abuur leh!
Isu diyaari inaad muujiso qiimahaaga. Had iyo jeer muuji, marna ha u sheegin, inta qiimaha aad miiska keenayso. Samee liistada qaababka aad u abuureyso isbeddel wanaagsan haddii bartilmaameedku sameeyo wixii aad weydiisatay.
Diyaarso qodobbada liiskaaga sida ugu qiimaha badan ujeeddadaada ugu horreysa ugu yaraan.
Iska jar. Ka takhalus qodobbada ugu waxtarka yar.
Faahfaahinta faahfaahinta tallaabo kasta oo geeddi-socod guud ah si loo qorsheeyo, loo qoro, loona hagaajiyo nuqulkaaga jawaabta tooska ah. Waxay faahfaahin ka bixineysaa dhexdhexaad kasta, ma aha oo kaliya wicitaanka ficilka. Peter sidoo kale wuxuu bixiyaa tusaalooyin yar oo ah sida isbeddelka fudud ee ereygu saameyn ugu yeelan karo akhristaha:
"OpportunityHalkii laga dhigi lahaa "Mar uun noloshaada." Runtii ma hal jeer baa nolosha oo dhan? Malaha maya. Hadday tahay, maxaad uga iibinaysaa qof kale? Halkaas ka gal adigu!
"Baro”Meeshii“ Weligeed lama arag. ” Waxaad iibineysaa wax, sidaa darteed waa macquul inaad aragtay, ugu yaraan sawir uu qaaday qof halkaas joogay nolosha dhabta ah.
"Exclusive"Ka dhakhso!" In kasta oo wakhtigu dhiirrigelin noqon karo, haddana kan ayaa si xad dhaaf ah loo isticmaalay oo awood ahaan ma leh wax awood ah. Dalabyada dhacaya daqiiqado yar gudahood sidoo kale waa maya.
Waa tan faahfaahinta buuxda, Qoraalka Jawaabta Tooska ah: Nuqul Abuurista oo beddeleysa:
Tags: qoraalka nuqulqaaciddada qoraalkatilmaamaha qoraalka qoraalkactanuqul toos ahjawaab toos aholole jawaab toos ahnuqul jawaab toos ahsida looinfographickoeppel toos ahPeter koeppelwaxawaa maxay jawaab toos aherayadatalooyinka qorista
Uma maleynayo in suuqgeyntu tahay lacag sameynta